Dadaalo Lagu Xoojinayo Istaraatijiyadaha Horumarineed. - Cakaara News
Dadaalo Lagu Xoojinayo Istaraatijiyadaha Horumarineed.
Jigjiga (CN) Axad, 17ka October 2015, Wasiir ku xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane Axmed Shugri Cabdi oo xafiiskiisa ugu warayay qaarka mid ah warbaahinta deegaanka ayaa ka warbixiyay dadaalada xoogan ee lagu hirgalinayo fidinta istaraatijiyadaha arimaha adeegyada kaabayaasha dhaqaalaha ee horumarinta magaalooyinka iyo istaraatijiyadaha kaabayaasha dhaqaalaha isku dhafka ah ee lagu fidinayo magaalooyinka DDSI.
Wasiir ku xigeenka oo ka waramaya qorshayaashasi waxa uu yidhi”xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshaduhu waxa uu dadaal ugu jiraa sidii loo xoojinta lahaa xaqiijinta horumarinta magaalooyinka DDSI oo kaalin muhiim ah ku leh dhaqaalaha deegaanka iyo dalkaba. si loo xoojiyo kaalintaasi waxaa xafiisku dajistay barnaamijyo lagu horumarinayo magaalooyinka DDSI, waxaana ka mid ah barnaamijyadaasi horumarinta qorshe hagaha bilicda iyo nadaafada magaalooyinka oo xooga la saaray taasi oo sahlaysa sidii ay magaalooyinka deegaanku dhamaantood u noqon lahaayeen kuwo leh qorshe hage lagu hago horumarkooda.
Hadaba xafiisku isaga oo ka duulaya hirgalinta qorshayaasi ayaa waxa uu sanadka 2008TI qorshaystay samaysiga iyo hirgalinta qorsha hagaha magaalooyinka taas oo ay ka mid yihiin magaalooyinka laga bilaabayo hirgalinta qorshe hagahan magaalada fiiq iyo hadhagaale halka balaadhinta qorshe magaha magaalada shiniile hada la bilaabayo iyada oo la dhamays tiray diyaar garowgii qorshe hagaha magaalada mubaarik oo maalmahan soo socda la bilaabayo’
Waxaa kale oo uu intaasi ku daray wasiir ku xigeenku in sanadkan hirgalinta qorshe hagaha magaalooyinka loo wajahay nidaam kaduwan kana xoogan kii hore wuxuuna tilmaan dheer ka bixiyay in qorshe haguhu (master plan) yahay furaha horumarineed ee magaalooyinka, kaalin wayna uu ku soo kordhin doono kor u qaadida koboca dhaqaalaha, dakhliga, maalgashiga iyo arimaha bulshada iyada oo uu xafiisku wakhtigan xaadirka ah awoodiisa fulineed ee cududa shaqaaluhu aad u sarayso.